Ciidamada amaanka ee Degmooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb oo xiray dad ka yimid Deegaanka Bohol | dayniiile.com
Home WARKII Ciidamada amaanka ee Degmooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb oo xiray dad ka yimid ...
Ciidamada amaanka ee Degmooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb oo xiray dad ka yimid Deegaanka Bohol
Ciidamada amaanka ee Degmooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb ayaa xiray tiro aad u badan oo kamid ah dadkii Maalmo ka hor Deegaanka Bohol uga qaybgalay munaasabad ay kasoo muuqdeen madaxda kooxda la baxdey Ahlusunna.
Ciidamada oo adeegsanaya macluumaad gaar ah iyo tixraaca sawirada iyo muuqaaladii laga duubey bohol ayaa labada Magaalo ka bilaabay in Dadkaasi la soo qabto, waxaana caawa xabsiyada ku hoyanaya xubno aad u badan oo qaarkood lagu tuhmayo in ay kooxda ku taageereen hiil dhaqaale iyo farsamooyin kaleba.
Marka laga soo tago in la dhigo Munaasabadaas oo kooxda la baxdey Ahlusunna Sanad waliba qabato, hadana waxa ay Xambaarsaneed Fariin Dagaal oo kooxdani halkaasi ka soo diraysay, waxa ayna soo bandhigeen dhalinyaro ay hubeeyeen.
Previous articleCiidamo katirsan NISA oo caawa xirtay waddooyinka gala garoonka Aadan Cadde iyo Shaki laga qabo
Next articleCiidan ka tirsan NISA oo rasaas ku ridau Gaari uu leeyahay Ilyaas Cali agagaarka hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho.
Maamul Goboleedkii Ugu Horreeyay Oo War Kasoo Saaray Guusha Aadan Madoobe